ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအား တိုင်ကြားထား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအား တိုင်ကြားထား
- ဇောက်ထိုး မိုးမျှော် သခင် ကိုယ်တော်
Posted by ဇောက်ထိုး မိုးမျှော် သခင် ကိုယ်တော် on Oct 22, 2011 in Copy/Paste | 33 comments
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအား-နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ (က) နှင့် ငြိစွန်းနေကြောင်းဒီမိုကရစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီမှ
အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို.ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီအတွင်းရေးမှု.ဦးမျိုးညွန်.မှ
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ (က) တွင် “နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေး၊ မြေ၊ အိမ်၊ အဆောက် အအုံ၊ ယာဉ်၊ ပစ္စည်းတို့ကို
တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခြင်း” ပါက ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သီတင်းတင်ထားသူမှာ-ညီသစ် | သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၃၄ မိနစ်။
အသင်းသည်နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေး၊ မြေ၊ အိမ်၊ အဆောက် အအုံ၊ ယာဉ်၊ ပစ္စည်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခိုင်လုံစွာအထောက်ထားမပါအခြေအမြစ်မရှိပဲသတင်းဖြစ်ရင်ပီးရောဆိုထုတ်ပြန်တဲ.သတင်းဌာနကိုလည်းအံသြမိပါတယ်။
About ဇောက်ထိုး မိုးမျှော် သခင် ကိုယ်တော်
View all posts by ဇောက်ထိုး မိုးမျှော် သခင် ကိုယ်တော် →
မိတ်ဆွေတို့ ရော၊ကိုယ့်ညီကိုတို့ ရော သိပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက လူမှုရေးဘဲလုပ်မှာပါ၊နိုင်ငံရေး ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး
လို့ သူတို့ ဘဲပြောခဲ့တာလေဗျာ။တရားမဝင်ပါတီကတော့ ပြောနေစရာကိုမလိုပါဘူး ကိုယ့်ညီကိုရာ။တို့ သံတွဲတင်ဘယ်ကမလဲ တနိုင်ငံလုံးအဲ့ ပါတီရဲ့ ပါတီဝင်တွေထဲမှာ သူခိုး၊ကျပိုး၊ဖာကောင်း ပေါင်းစုံပါနေတာအားလုံးအသိပါဘဲ။မြို့ ရဲ့ ပျက်လိုပျက်စီး ပြုမဟုတ်တမ်းတရားတွေတက်ရေး၊သတင်းလွှင့်နေသူ
များဟာလဲ ကြံ့ခိုင်ရေးက သူတွေပါဘဲဗျာ။
လူမှုရေးပြောတာနဲ့ နိုင်ငံ့အရေးကို မလုပ်ရဘူးလို့ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ သို့သော် “လူမှုရေးဘဲ လုပ်မှာပါ။ နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူး” လို့ပြောခဲ့တာတော့ အမှန်ပါဘဲ။ နိုင်ငံ့အရေးဆိုသည်မှာ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး ဟုထင်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ အာဏာနိုင်ငံရေးဟု ယူဆပါသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းတွင် ကျောင်းသားများ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ပြည်သူများ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပါတီ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းသည့်အခါ အသင်းဝင်များထံမှ ဆန္ဒ တောင်းခံသည်ဟု မကြားမိပါ။ အသင်းဝင်များ မှလှူ ဒါန်းခဲ့သော ငွေသည် ပါတီအတွက်မဟုတ်ပါ။
ဖါခေါင်းပါဗျ။ ဖါကောင်းမှတော့ ကြံ့ဖွတ်အသင်းထဲ ဝင်ပါ့မလား…။
အဆင့်အတန်းက ဒီလောက်ဘဲ ရှိတော့တာလား
အာရက္ခမြေသားက ကြံ့ခိုင်ရေး မုန်းတီးရေးဝါဒ သမားပေါ့နော် ၊
နိုင်ငံရေး သေချာမသိပဲ သပုတ်လေလွင့် ရမ်းပြောတာ ဘယ်သူ့တွက်မှ အဆင်မပြေဘူးနော် ၊
ဘယ့်အတွက်ကြောင့် ဘာကြောင့် စာဖတ်သူတွေ သိရှိနားလည်အောင် ရှင်းမပြန်ိုင်ပဲ
မုန်းတီးမှုနဲ့ ရမ်းတုတ်နေခြင်းက မိမ်ိရဲ့ အဆင့်အတန်းကို သတ်မှတ်သလို ဖြစ်နေတယ် ၊
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီးကို ကြိုက်တဲ့သူ ရွာသူရွာသားထဲမှာ မရှိသလောက်နည်းနေမှာပါ၊
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးကို သေချာလေ့လာပါအုံး ၊ တိကျသေချာ စွာနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်
ဝေဖန်မှုမျိုးကို ဖတ်ချင် ပါတယ် ။ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ စာသားတွေကို မည်သူတစ်ဦး
တစ်ယောက်မျှ လိုလားမည်ဟု မထင်ပါ ၊ ထို့ကြောင့်……………..
ဖြည်းဖြည်းနော် ကိုယ့်ဆရာတို့ . ဘာအက္ခရာလဲ မသိနိုင်သေးလို့ ခဏစောင့်
အရာရာတိုင်း ကောင်းလာသလား ဆိုးလာသလား လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့ ။
ဒါပေါ့။ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြစ်မြင်ပုတ်ခတ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်စွဲနဲ့ ၀ါဒကွဲနေတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ တစ်ဘက်တည်းမကြည့်ပဲ ဟိုဘက်ဒီဘက် အပြန်အလှန် သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။
ကောင်းသည် ဆိုးသည် ဤ နှစ်လီ
စောင့်ကြပါစို့ အတည် ။
ကိုယ်တိုင်သတင်းရေးသူက သတင်းကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်တာ ကောင်းပါ၏ ..။
ဝေဖန်ရရင်တော့ စောင့်ကြည့်နေသူအားလုံး မှ ကျနော်လဲအပါအဝင် ဖြစ်ပါ၏…။
ကောင်းလျှင် ထောက်ခံရန် ဝန်မလေးပါ ..။
တက်လာသော သတင်းလို့ လုပ်ပါ မတတ်ပါနဲ့
ပြောရရင် ဘယ်သူကမှ ၀င်ပြီးသေချာမန့်နေတာမဟုတ်ဘဲ ဘေးထိုင်ဘုပြောတဲ့သူနဲ့၊ သူလျှိုဒလံတွေရေးနေတဲ့ မန့်စာတွေပဲတွေ့ရတယ်.. ခေါင်းစဉ်ဖတ်ကြည့်တော့ ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ သတင်းစာဆောင်းပါးရေးတဲ့သူလိုဖြစ်နေတယ်..
ဆိုတော့ကာ ဝေဖန်ခံချင်လို့ရေးတယ်ထင်တဲ့အတွက် ရိုးရိုးသားသား ဝေဖန်ပြမယ်၊ စာရေးသူကို
ကျုပ်က ဘာကောင်မှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ ဒါပေမယ့် အမြင်မတော်ရင် ၀င်ပြီးဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာလုပ်တတ်တယ်..စစချင်း အပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာသားတွေကို သဘောမကျဘူး၊ လေသံက ၀န်ထမ်းလေ ပေါက်နေတယ် (ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်ဖူးလို့သိတယ်ပြောတာ)၊ နောက်တစ်ချက်..အာရက္ခမြေသားဆိုတာ အရင်ကတည်းက အဲလိုစိတ်မျိုးနဲ့ အဲလိုစာတွေရေးနေကျ၊ မသိဘူးထင်လို့ ပြန်ပြောတာမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဥပဒေဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ကိုင်မပေါက်ပါနဲ့၊ လူယဉ်ကျေးအပြုအမူမဟုတ်ဘူး၊ အာဏာရှင်လေသံနဲ့မပြောနဲ့၊ ဒီမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်မန့်မှာပဲ၊ မမန့်စေချင်ရင် မရေးနဲ့၊ ရှင်းရှင်းနဲ့ ဘွင်းဘွင်းပြောတာ
ပြီးတော့ပြောမယ်ဆို အကျိုးအကြောင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပြော၊ ကြံ့ဖွံ့အသင်းက အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြု ပါတီမဟုတ်လို့ဘာလဲ? နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းတွေ မသုံးခဲ့ပါဘူးလို့ ပြန်ချေပစရာ အချက်အလက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိလားပြော? နိုင်ငံတော် ကောင်းကျိုးအတွက် လုပ်နေပါတယ်ဆိုသူတွေ ဘယ်မှာ ပြည်သူတွေက လှိုက်လှိုက်လဲလဲနဲ့ ကြံ့ဖွံ့ဆိုပြီး ကြိုဆိုလဲပြ၊ ပြောရရင် ငါ့စကားနွားရမပြောပါနဲ့၊ မြန်မာပြည်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေက နီးရာဓါးကို ကြောက်နေရတဲ့အချိန်မို့ စာရေးသူခြိမ်းခြောက်တဲ့ “ဥပဒေ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးကို ဘာမှန်း၊ညာမှန်းမသိ ကြောက်မှာပေါ့၊
စာရေးရင် ၀န်ထမ်းလေကင်းကင်းရေးပါမောင်၊ ခြိမ်းခြောက်တဲ့စကားလုံးတွေ မပါပါစေနဲ့၊ အမေးရှိလာရင် အဖြေရှိဖို့ ကိုယ့်ဖက်က အချက်အလက် ခိုင်လုံနေပါစေ၊ မညှာမတာဝေဖန်ရင်လဲ လက်ခံနိုင်ပါစေဟု အားရပါးရ ဝေဖန်ပေးလိုက်ပါကြောင်း…
*စာရေးသူခြိမ်းခြောက်တဲ့ “ဥပဒေ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးကို ဘာမှန်း၊ညာမှန်းမသိ ကြောက်မှာပေါ့၊
စာရေးရင် ၀န်ထမ်းလေကင်းကင်းရေးပါမောင်၊ ခြိမ်းခြောက်တဲ့စကားလုံးတွေ မပါပါစေနဲ့၊ အမေးရှိလာရင် အဖြေရှိဖို့ ကိုယ့်ဖက်က အချက်အလက် ခိုင်လုံနေပါစေ၊ မညှာမတာဝေဖန်ရင်လဲ လက်ခံနိုင်ပါစေဟု အားရပါးရ ဝေဖန်ပေးလိုက်ပါကြောင်း…*
ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီအတွင်းရေးမှု.ဦးမျိုးညွန်.မှတိုင်ကြားထားသည်ဆိုရင် သူတိုင်တဲ့အထဲမှာ သက်သေအချို့တော့ ပါမှာပဲ။ သက်သေခိုင်လုံမှုရှိမရှိစီစစ်လို့ ရလာတဲ့ အဖြေတစ်ခုကိုပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဒူ ဝေ ဝေ ဝေ ………….
ဒီပို့ စ်တစ်ခုလုံးမှာ koyinmaung ကွန်မင့် အမှန်ဆုံး
ဒီမယ် အထက်က ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ။
ဥပဒေ ဆိုတာ သက်သေနဲ့ တင်ပြရတယ် ဟုတ်လား ။
ဘယ်လို သက်သေမျိုးလိုချင်လဲ ???
အသေးစားချေးငွေ ၃ သိန်း ထုတ်ပြရမလား။ တရက် ၁ သောင်းနဲ့၁ လ ပြန်ဆပ်ပြရမလား။
ဒါမှ မဟုတ် နားလည်မှုနဲ့ရက်ကို လျှော်ပြရမလား။ အသင်းပိုင်ငွေကို ၅ သိန်း ထုတ်ပြီး တက္ကဆီ
စပေါ်တင်ပြရမလား။ အသင်းပိုင်ငွေနဲ့နေ့ ပြန်တိုးချေးပြရမလား လပြန်တိုးချေးပြရမလား။
မှတ်ပုံတင် အစားထိုးလို့သမုတ်ကြတဲ့ အသင်းဝင် ယာယီ ကဒ် လုပ်ပြရမလား။
ဘယ် မြို့ နယ် မှာ လုပ်ပြရမလဲ။ လမ်းမတော်မှာ အဲဒီဟာတွေ အားလုံး လိုချင်လား။
သက်သေ အထောက်အထား လိုချင်ရင်ပြောနော်။ အေး…အလကားတော့ မရဘူး။
မှန်လိုက်လေ တပ်မ77 ရယ်
ဘယ်သူက ထမင်းအလကားလာကျွေးမှာမို့ တုန်း….နော
ကိုယ့်ညီကိုတို့ ရေ။ကျွန်တော်က ပြောစရာရှိရင် ရှင်းရှင်းနဲ့ ထဲ့ဒိုးပြောတတ်တော့ ကတောက်ကဆဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဗျာ။အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာ အာဏာရှင်တွေရဲ့ မဲလိမ်၊မဲခိုး၊ငါ့ဥပဒေငါရေး၊သူ့ ရွေးကောက်ပွဲသူလုပ်၊သူလူသူ အာဏာအပ်ကြီးစိုးလာတာအားလုံးအသိပါ။အများပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားပါတယ် ဆိုရင် သမ္မတ လုပ်သူအသာထား ဘာမဟုတ်တဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေတောင် အစောင့်အရှောက်မပါဘဲ လူထုကြားသွားရဲပါသလားမေးကြည့်ပါ အုံးကိုယ့်ညီကိုတို့ ရေ။
ကြံ့ဖွံ့ ပါတီဝင် တွေထဲမှာ အများယုံကြည်ရသူဘယ်နှယောက်များပါသလဲ။အားလုံးသူ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါအုံး။
nigimi77 ရေ…….. လုပ်လိုက်ကွ……။ ၀မ်းစမိုးးးးးးးးး
“”ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းတွင် ကျောင်းသားများ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ပြည်သူများ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ “”
ဒီပို့စ် ကိုတော့ဘာမှမမန့် ရဲပါဘူး။
အပေါ်ကစာသားလေွးေ့တော့ သတိရလို့ပါ၊ ၀င်ထမ်းဟာပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့
ဥပဒေ ဆိုတဲ့ဟာအရ ဆိုရင် အသင်းဝင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းက ပါတီပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ပါတီဝင်အဖြစ်ကထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာလား၊ အလိုလိုထုတ်ပယ်ပြီးဖြစ်သွားတာလား၊ အခုထိပါတီဝင်အဖြစ်ရှိနေသေးသလား ကျွန်တော်သိပ်မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဟ… ကြောင်လေးရ ကြံဖွတ်အသင်းဆိုတာ
အဖွဲ.၀င်၂၂သန်းရှိတယ်ဆို :D ကမ္ဘာပေါ်မှာအဖွဲ.၀င်ဦးရေအများဆုံးဆိုတဲ့တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ
The CPC(Communist Party of China) is the world’s largest political party, claiming over 80 million members at the end of 2010 which constitutes about 6.0% of the total population of mainland China.
ပြည်ခိုင်ဖြိုးက.. လောလောဆယ်တော့ အာဏာရပါတီပဲ..။
အစိုးရလည်း တပါတီထဲနဲ့ဖွဲ့နိုင်တယ်..။ လွှတ်တော်ထဲ.. ခုံ(အမတ်နေရာ) အများစုလည်းရထားတယ်..။
တပ်မတော် ကျောထောက်နောက်ခံလည်း ရှိတယ်..။
မေးချင်တာက.. အတိုက်အခံ. NLD ဘာလည်း.. ဘယ်လည်း…။
မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး..အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ရင်.. ၂ပါတီစံနစ်နဲ့သွားဖို့ လိုတယ်ထင်မိတယ်..။
အမေရိကနိုင်ငံလိုပေါ့..။ ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်နဲ့.. ဒီမိုကရက်ပါတီလိုပေါ့…။
အဲဒါဆို.. မြန်မာပြည်အင်မတန်တိုးတက်သွားမယ်.. ထင်မိတယ်..။
၁ယောက်ထဲ.. ၃မျိုးကွဲပြဲနေတဲ့.. မြန်မာတွေစိတ်နဲ့တော့.. တော်တော့ကို.. မလွယ်ရေးချ…မလွယ်..။
တည်ငြိမ်တဲ့ နိုင်ငံရေးရဖို့.. ဆယ်စုနှစ် ၂ခုမက စောင့်ရဦးမှာ..။
လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲခွင့် ရှိတဲ့..အချုပ်အနှောင်.မပါတဲ့.ပါတီ စုံစနစ်.
ငတ်လို့ဖြစ်တဲ့ ကြံ့ဖွတ် နောက်လိုက်တွေကတော့. အရပ်ထဲမှာတောင် ခေါင်းမဖော်ရဲ..
အဲ ပိုက်ပိုက် ရမှန်းသိလို့ ၀င်ဝါးတဲ့ လူတွေကျတော့ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်မလုံ..
ဒီတော့ ပြောကြသည် ကြံ့ဖွတ် ကောင်းပါသည်ပေါ့ဗျာ…
koyinmaung ကြီးပြောတဲ့ ငါးမင်းဆွေကြီး တော့ ကိုယ်ဆွေ.ကိုယ်မျိုးတွေ အတွက်